भङ्गेराको टाउको किन खाने ? – Annapurna Post News
April 13, 2022 sujaLeaveaComment on भङ्गेराको टाउको किन खाने ?
-सकारात्मक विचार ल्याउनुहाेस् । बिहान उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक कुराहरू मात्र साेच्ने गर्नुहाेस् । यसाे गर्नाले दिनकाे राम्राे सुरूवात हुन्छ । नकारात्मक कुराहरू साेच्न थाल्नुभयाे भने दिमाखमा नराम्रा कुराहरू मात्र घुमिरहन्छन् । दिन नै खराब हुन्छ । आफुलाई के के कुरामा खुशी मिल्छ त्यही कुराहरू मात्र सम्झिनुहाेस् ।
जसकारण दिननै खुसीसाथ कटाेस् । तपाइका जिवनका रमाइला क्षणहरूलाई याद गर्नुहाेस् ।